सिन्डिकेट हट्दा नागरिकलाई के हुन्छ फाइदा ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
(July 16, 2019)
सिन्डिकेट हट्दा नागरिकलाई के हुन्छ फाइदा ?
बैशाख २४, २०७५ सोमबार ८:६:२५ | मदन पौड्याल
काठमाडौं, वैशाख २४ – थोत्रा गाडीमा कोच्चिएर गन्तव्यमा पुग्नु सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुको साझा भोगाई हो । उभिन पनि सुविधासँग नपाइने, त्यसमाथि सहचालकको रुखो व्यवहार पनि सहनुपर्ने । मनलाग्दी भाडा उठाउने, जहाँ पायो त्यहिँ रोक्ने जस्ता वाक्कदिक्क लाग्दो अवस्था छ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ।
तर, सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि हायलकायल भएका सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी सहमत भएका छन् । यससँगै अब राहत पाउने यात्रुको आशा छ । काभ्रेको धुलिखेल बसपार्कमा भेटिएका रामगोपाल भुजेल अब थोत्रा बस चढ्नु नपर्ला कि भन्ने आशा पलाएको बताउनुहुन्छ ।
देशैभरका यातायातका संघ र समिति खारेज गरी तिनलाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको निर्णयपछि सुधारका संकेत देखिन थालिसकेका छन् । सिण्डिकेट हटेपछि नयाँ लगानीकर्ता भित्रनेछन् । नयाँ लगानीकर्ताले सुविधा सम्पन्न गाडी चलाउनेछन् । यसअघि जस्तोसुकै गाडी भए पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनी नहुँदा चुपचाप चढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अब त्यस्तो हुने छैन ।
प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडा पनि घट्नेछ । यसको पुष्टि नयाँ सुविधासम्पन्न गाडी चल्न थालेपछि धुलीखेल – काठमाडौं रुटमा भाडा घटेकोले नै भइसकेको छ । अरबौँ रुपैयाँको कारोबार गरे पनि राज्यलाई कर नतिर्दै आएका व्यवसायीले अब कर तिर्नुपर्नेछ ।
सरकारसँग रुट इजाजत लिएर पनि सडकमा गाडी गुडाउन यातायात व्यवसायीसँग रुट किन्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । सडक कब्जा गर्ने यातायात व्यवसायीको चाहना अब पूरा नहुने भएको छ । बस व्यवसायमा खुला प्रतिस्पर्धा लागू भएपछि सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले आन्दोलन गरिहेरे पनि सरकारी अडान, आम नागरिकको पनि सरकारलाई नै समर्थन भएपछि उनीहरुको केही जोर नचलेको हो ।
शुक्रबार सिण्डिकेट पक्षधरले गरेको यातायात बन्दमा कम्पनीमा दर्ता भई नयाँ प्रवेश गरेका साझा, महानगर, मयूर, अन्नपूर्णलगायत कम्पनीले गाडी चलाएर सेवा दिए । निजी सवारीधनी र मोटरसाइकल चालकले पनि लिफ्ट दिए । सामाजिक सञ्जालमा पनि सिन्डिकेटको चर्को विरोध भयो । नागरिकको भावना अनुसार नै सरकारले कदम चालेपछि अन्ततः यातायात व्यवसायी झुक्न बाध्य भएका छन् ।
सिन्डिकेटकै कारण यात्रा असुरक्षित समेत छ । विकल्प नहुँदा जतिसुकै पुराना गाडी र सिकारु चालक भए पनि चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सिन्डिकेटकै कारण एउटा रुटमा चल्ने गाडी अर्को रुटमा जान पाउँदैनथे । व्यवसायीले एउटा बस किनेर कुनै रुटमा चलाउन चाहँदा सम्बन्धित समितिलाई लाखौ रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्याे । अनि मात्र रुट पाइन्थ्यो । आफ्नो अनुमनि बिना नयाँ गाडी गुडाउन खोजे तोडफोड समेत हुने गरेको थियो । संघ र समितिका आडमा हुने चालक/सहचालकको मनोमानी पनि उत्तिकै थियो ।
सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चल्थ्यो । बेलाबेलामा सरकारले उनीहरुलाई अंकुश लगाउन खोजेपनि सरकार कठोर हुन नसक्दा व्यवसायी बलिया भए र नागरिक ठगिएको ठगियै भए । तर अहिले सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका व्यवसायी एक्लिएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा एकछत्र अधिकार जमाइरहेका र सरकारलाई समेत चुप लगाउन सफल भएका यातायात व्यवसायी सरकारका पछिल्ला कामबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले सिण्डिकेट माग्दै आन्दोलन गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ समेत गरेपछि उनीहरु सिण्डकेट नगर्ने कागज गरेर छुटेका छन् । रुट इजाजत नै रद्ध गर्दै समितिको सम्पत्ति छानविन र बैक खाता रोक्का गर्ने काम थालेपछि व्यवसायीको जोर चलेन ।
२०५० साल यता यातायातका सिण्डिकेटधारी व्यवसायीको एकोहोरो दवाव पहिलो पटक असफल भएको छ । गएको चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यो व्यवस्थाले देशैभरका कुनैपनि राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले रुट इजाजत लिन सक्ने भएका छन् ।
अब देशभरका कुनैपनि सडकमा गाडी चलाउन चाहने कम्पनीले रुट इजाजत लिन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताउनुभयो । वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा दर्ता भएका समिति र संघ नविकरण नहुने भएका छन् । सरकारका पछिल्ला निर्णयले यात्रुलाई सास्ती दिएर सरकारलाई झुकाउँदै आएका यातायात व्यवसायीको मेरुदण्ड नै गलेको छ ।
अन्तिम अपडेट: जेठ २९, २०७६
उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।
​मिर्गौला तस्करीको आरोपमा एकजना पक्राउ, तस्करीमा गिरोह नै सक्रिय
एन्फामा गणेश थापा युगको अन्त्य, अध्यक्षमा कर्मा छिरिङ विजयी
बैशाख २२, २०७५ शनिबार
बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६९ पुग्यो, ३० जना बेपत्ता
एकदिवसीय क्रिकेटकाे नयाँ वरीयता : ब्याटिङतर्फ काेहली, बलिङतर्...
प्रदेश ३ योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाद्वारा राजीनामा
बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा रोगको जोखिम : यसरी सावधानी अपनाऔँ
राति अबेरसम्म बैंक खुला राख्न सरकारको निर्देशन
ललितपुरमा वर्षाको प्रभाव : विद्यालय बन्द, यातायात अवरुद्ध
मंगलबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ घट्यो
‘मेरो डायलग अमरिश पुरीको जस्तै थियो रे !’
अब बिस्तारै पानी पर्ने क्रम घट्दै जान्छ : मौसमविद्
विद्यालयमा कोट र टाइ नलगाउँदा प्रधानाध्यापकबाटै कुटिए शिक्षक
सप्तकोशीको बाढी र खतराको सूचना : ‘हरि दाइ’कै भरमा सरकार
उदयपुरमा पहिरोले पुरिएर ९ वर्षीय बालक बेपत्ता
कोशी ब्यारेज, ५६ ढोका र राता बत्तीको वास्तविकता
क्षमताभन्दा बढी पानी भरिएपछि कुलेखानीकाे ड्याम खाेल्ने तयारी, चार जिल्लाका नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह
भारतीय क्रिकेट टिममा ठूलाे परिवर्तनकाे संकेत, विराटकाे कप्तानी खाेसिन सक्ने
भिजिट भिसामा यूएई जान दूतावासको सिफारिस पत्र आवश्यक पर्दैन: अध्यागमन महानिर्देशक पौडेल